Miyuu Ronaldo diyaar u yahay kulanka habeen dambe ee Lithuania? – Waxaa ka jawaabaya xiddig ka tirsan xulka qaranka Portugal – Gool FM
(Yurub) 13 Nof 2019. Xiddiga xulka qaranka Portugal ayaa ku wajihi doono habeen dambe dhigiisa Lithuania, kulan ka tirsan isreeb-reebka koobka Euro 2020, iyadoo saddex maalin kaddib ay kula ciyaari doonaan Luxembourg wareega ugu dambeeya.
Haddaba xiddiga xulka qaranka Portugal iyo kooxda Frankfurt ee Gonçalo Paciência ayaa wuxuu sheegay in xiddiga ay isku wadanka ka soo wada jeedaan ee Cristiano Ronaldo uu diyaar u yahay inuu ciyaaro kulanka habeen dambe ee Lithuania, isagoo ku tilmaamay inuu yahay xiddiga adduunka ugu fiican.
Ronaldo ayaa la bedelay kulankii ugu dambeeyay ay kooxdiisa Juventus ku wada ciyaareen AC Milan horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga, iyadoo ciyaarta kaddib uu macalinka Juve ee Maurizio Sarri sheegay in Cristiano uu qabo dhaawac.
Laakiin ciyaaryahanka ayaa si dhaqso leh uga jawaab celiyay, kaddib markii uu ka soo muuqday xerada tababarka ee xulkiisa qaranka Portugal, si uu ugu diyaar garoobo kulanka ay habeen dambe wajihi doonaan Lithuania.
Haddaba xiddiga xulka qaranka Portugal iyo kooxda Frankfurt ee Gonçalo Paciência ayaa kaddib shir jaraa’id uu ka soo muuqday wuxuu ku sheegay:
“Ronaldo wuxuu joogaa halkan, sababtoo ah wuxuu diyaar u yahay inuu ciyaaro”.
“Laakiin nasiib darro xaaladdiisa jir ahaaneed, uma lihi waayo-aragnimo caafimaad”.
“Waxaan imid shalay sagaalka subaxnimo oo dhiman toban daqiiqo, waxaan helay waqti aan ku salaamo Ronaldo, sidaad ogtahay, tani waa markii ugu horreysay ee aan la kulmo kabtanka, sida iska cad waxaan weydiiyay su’aal ku aadan, (waa sidee xaaladaada jir ahaaneed?)”.
“Laakiin halkan waa 100%, isaga sida ugu fudud waa kan ugu fiican adduunka, taasna waa mid muujineysa wax walba”.